theZOMI: Burma News International - March 20, 2013
Burma News International - March 20, 2013
Burma army obstructing truce agreement with RCSS/SSA
When the RCSS/SSA signedaceasefire on Dec. 2, 2011, the government promised that they would be able to specify their controlled territories and be allowed to buildapermanent headquarters. Since then, both sides have met5different times. The ceasefire has already reached the Union-level but the government hasn’t kept its promises. To make matters worse fighting between the RCSS/SSA and the Burma army continues. Since the ceasefire was inked there have been over 50 separate clashes between the two sides.
The Myanmar government have suspendedacontroversial draft media bill until mid-April. The media bill drafted by the Interim Press Council will now be put forward to the Lower House when the parliamentary sessions resume after Myanmar's traditional Water Festival ends on April 17, Kyaw Min Swe, the general secretary of the Interim Press Council, told Mizzima.
Burma News International launches peace process book in Bangkok
Burma News International (BNI), heldapress conference to launch the Deciphering Myanmar's Peace Process: A Reference Guide book at the Foreign Correspondents’ Club of Thailand (FCCT) in Bangkok on Monday. The 184 - page book outlines the current state of affairs for the various ceasefires between Burma ethnic armed groups and the Union government. BNI isacoalition of 11 different media groups from Burma;9of which are ethnic.
An order issued by Maungdaw Township state authorities has made it illegal for Rohingyas to pray in their own mosques.
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရေး ရှမ်းနှင့် ကယား ညီလာခံ ဆွေးနွေး
တိုင်းရင်းသားများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရန်အတွက် လက်ရှိ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ရန်လို အပ်ကြောင်း ယနေ့ စတင်ကျင်းပနေသည့် ရှမ်းနှင့် ကယားပြည်နယ်ရှိ လက်နက်ကိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ ညီလာခံတွင် ဆွေးနွေးသဘောတူညီခဲ့ကြသည်ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD)က ပြောသည်။
ရှမ်း-ကယား ညီလာခံ KNPP တက်ရောက်ခြင်း မရှိ
စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းမှု တည်ဆောက်ရေး အပေါ် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်၌ မှီတင်း နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်း သားများ၏ သဘောထား အမြင်များ ရယူရန် ဒုတိယ အကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို ကရင်နီ တိုးတက်ရေး ပါတီ (KNPP) မှ တက်ရောက် နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း KNPP အတွင်းရေးမှူး (၁) ဖြစ်သူ ခူးဦးရယ်က ဆိုသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း သျှမ်းပြည်နယ် ကယားပြည်နယ် ဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့မနက်က စတင်ရာ မြန်မာအစိုးရဘက်မှ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒု ဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်းလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အစီအစဉ် ၈ ခုဖြင့် ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။
ငါးဖမ်းခွင့်လိုင်စင်ရရှိထားသူကြောင့် ဝမ်းစာငါးရှာသူများ အခက်အခဲဖြစ်
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက္မရောမြို့နယ် အတ္ထရန်မြစ်ကြောင်းအတွင်း ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် ငါးဖမ်းခွင့် လိုင်စင်ရထားသူ တစ်ဦးကြောင့် လိုင်စင်မဲ့ ဝမ်းစာ ငါးရှာဖွေသူများ အခက်အခဲတွေ့နေရသည်ဟု သိရသည်။
စစ်ပြေးဒုက္ခသည်နေအိမ် ဆောက်လုပ်ရေး အကူအညီ လိုအပ်နေသေး
တောင်ငူခရိုင် သံတောင်ကြီးမြို့အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် စစ်ကြောင့် ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေ ရသော ပြည်တွင်းဒုက္ခသည် (IDP)များ နေထိုင်ရန် အတွက် NRC – Norwegian Refugee Council မှ အိမ်များ ဆောက်လုပ်ပေးလျက်ရှိရာ အကူအညီများ လိုအပ်လျက်ရှိနေသေးသည်ဟု ၎င်းတို့အား ကူညီပေးနေသော ခရစ်ယာန်နှစ်ချင်း သင်းအုပ်ဆရာက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မူများကြောင့် မြန်မာ- ဘင်္ဂလာ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးထိခိုက်
၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့သော ရခိုင် ပဋိပက္ခ အပါအ၀င် လက်ရှိ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မူများကြောင့် မြန်မာ-ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးကို အထူး ထိခိုက်နေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
CNF က၂၅ နှစ်ပြည့် ချင်းတော်လှန်ရေးနေ့ ငွေရတုသဘင်ကျင်းပ
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ၂၅ နှစ်ပြည့် တော်လှန် ရေးနေ့ ငွေရတုသဘင် အခမ်းအနားကို ၀ိတိုရိယ ဌာနချုပ်တွင် ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။
မြစ်ဆုံမှ ပြောင်းရွှေ့လာသည့် စံပြကျေးရွာတွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်၍ နေအိမ်ပျက်စီး
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ အထက်ဖက်ရှိ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရပြီး ပြန်လည် နေရာချထားသည့် အောင်မြင်သာ စံပြကျေးရွာတွင် လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နေအိမ်အချို့ ပျက်စီးသွားကြောင်းသိရသည်။
၃၉ နှစ်မြောက် မွန်ပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနားကို စည်ကားစွာ ကျင်းပ
မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် (၃၉) နှစ်မြောက် မွန်ပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနားကို ပြည်နယ်အစိုးရမှ ဦးဆောင်၍ မွန်ပြည်နယ်ခန်းမတွင် စည်ကားစွာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သံလွင်တိုင်းမ် အယ်ဒီတာ ကိုမင်းမင်းက ပြောသည်။
ဆုတောင်းပွဲကျင်းပရန် အစိုးရမှ တားမြစ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် သံလွင် ချစ်သူများအဖွဲ့ ရှုတ်ချ
ကရင်နီ(ကယား)ပြည်နယ်၊ ဖါးဆောင်းမြို့နယ်တွင် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က ကျရောက်သော နိုင်ငံတကာ မြစ်ချောင်းများဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သံလွင်မြစ်ကမ်းပါးရှိ ၀မ်အောင်းကျေးရွာတွင် ဆုတောင်းပွဲကျင်းပရန် စီစဉ်ခဲ့သည်ကို အစိုးရ အာဏာပိုင်တို့ တားမြစ်ခဲ့မှုကို ရှုတ်ချကြောင်း သံလွင်ချစ်သူများအဖွဲ့က ယနေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
အိန္ဒိယ-အာဆီယံ လွတ်လပ် ကုန်သွယ်မှုကိစ္စ မြန်မာနယ်စပ်ရှိ NGO အဖွဲ့များ စိုးရိမ်
အိန္ဒိယနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက သဘောတူခဲ့ကြသည့် လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှု (FTA)မှာ ပိုမိုပွင့်လင်းသော လုပ်ငန်းစဉ် ရှိရန် မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ အိန္ဒိယ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက